कुनै समय साहित्य वृत्तमा मुक्तक विधाले राम्रै स्थान पाएको थियो । मुक्तक विधाको ‘चार्म’ यति धेरै थियो कि काठमाडौंमा नभए पनि पोखरा, धरानजस्ता सहरका साहित्यप्रेमीहरू सशुल्क मुक्तक सुन्न रुचाउँथे । ती सहरहरूमा टिकटमा मुक्तक सुन्ने परम्परा बसालिएको थियो । तर, अब मुक्तकको स्वर्णीय समय रहेन । अचेल त मुक्तक हेलाहोचामा परेको विधामा दरिन पुगेको छ । न मुक्तक लेख्नेहरू धेरै छन्, न सुन्नेहरू नै । साहित्यको सीमान्त विधामा दरिन पुगेको छ अचेल मुक्तक । सःशुल्क मुक्तक सुन्ने, सुनाउने कुरा त झन् टाढैको विषय रह्यो ।
साहित्यमा हेपिएको विधाका रूपमा दर्ज हुन पुगेको मुक्तकलाई टिकाइराख्न केही स्रष्टाहरू भने प्रयत्नरत छन् । आख्यानले थिच्दै लगेको साहित्यिक बजारमा केही स्रष्टाहरूले मुक्तक लेखेर आफूले ग्रहण गरेको विधालाई जीवन्त तुल्याइराख्ने चाहना राखेका छन् । तिनै स्रष्टामध्ये हुन्– रुद्र ज्ञवाली । उनको ‘रुझेर अग्निवर्षामा’ मुक्तक सँगालो भर्खरै साहित्यिक बजारमा उपस्थित छ ।
संसारका हरेक प्राणी आफूलाई जन्म दिने माता–पिताप्रति सदैव श्रद्धानत हुन्छन् । प्राणीमध्येकै विशिष्ट मानिने मानिसमा त्यस्तो प्रवृत्ति हुनु स्वाभाविक पक्ष हो । जन्माउने, संसार चिनाउने र शिक्षा–दीक्षा, पालन–पोषणदेखि नैतिक सद्गुणहरू सिकाउने माता–पिताप्रति कृतज्ञ नभए अरू कोप्रति हुने हो र ? अधिकांशले के सोच्दछन् भने मुक्तक भनेको माया–प्रेमका शाब्दिक उच्छवासहरू हुन्, कुनै युवाले युवतीलाई आकर्षित गर्न लेखिने भावोद्गार हो । तर, मुक्तक त्यति साघुँरो घेरामा मात्र सीमित छैन, यसको क्षितिज फराकिलो छ । मुक्तककार ज्ञवालीले त्यही पक्षलाई पुष्टि गरेका छन् र उनले केही मुक्तक माता–पिताप्रति समर्पित गरेका छन् ।
‘घाँस काटेर घँसियाले भारी कस्नुको मज्जा अर्कै छ
सुस्ताएर चौतारीमा एकछिन बस्नुको मज्जा अर्कै छ
आत्मसुखको मृगतृष्णामा जहाँ जाऊँ जसो गरूँ
आमा भन्दै संघारभित्र पस्नुको मज्जा अर्कै छ ।’
हरेक आमाको हृदय विशाल हुन्छ, फराकिलो हुन्छ । आमाले आफ्ना सन्तानप्रति पोख्ने माया, ममता र सद्भावको उचाइ सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो छ । त्यसैले आमालाई ममताको खानी भनेर अथ्र्याउने गरिन्छ । पिताको स्नेहपूर्ण व्यवहार पनि आमाको भन्दा कम हुँदैन । असल गोरेटामा हिँड्न सिकाउने प्रथम श्रेय नै पितालाई जान्छ । पिताप्रति पनि यी शब्दहरू पोखिएका छन् ः
‘बा सर्वज्ञ ज्ञाता र ज्ञान विज्ञान लाग्थ्यो मलाई
दुनियाँका मान्छेभरिमा बा नै महान् लाग्थ्यो मलाई
बामै पुगेर टुंगिन्थे प्रत्येक प्रश्नका जवाफहरू
बा भन्नु नै जटिलताको समाधान लाग्थ्यो मलाई ।’
माता–पितापछि उनको मुक्तकको विषय सोझिएको छ, देश र माटोतिर । देशले परिवर्तनको नयाँ–नयाँ संघार टेकेर वर्तमान अवस्थासम्मको यात्रा गरेको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनअपेक्षा चुलिएका हुन्छन् । किनभने, परिवर्तनको उद्घोष गर्नेहरूले पनि परिवर्तनपछि नयाँ किरण झुल्किने आश्वासन दिएका हुन्छन् र जनता तिनै आश्वासनमा रमाउँछन् । तर, नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले परिवर्तनको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर कदम नचाल्दा भने जनतामा निराशाको दलदलमा फस्न पुग्छन् । जनतामा व्याप्त निराशाका चिह्नहरू औंल्याउने काम उनले गरेका छन् र लेख्छन् ः
‘जोतेर बाँझो धर्तीमा बीउ छरेको भए
सुक्खा गरा र सुर्कामा पानी भरेको भए
बेहाल यो मुलुकको किन हुन्थ्यो होला र
काम मिलेर अलिकति सबैले गरेको भए’ ।
देशमा परिवर्तनको झिल्का सल्काउने प्रतिज्ञा गरेर नालायक साबित भएका आफ्नै देशका नायकहरूप्रति उनको आक्रोश त छँदै छ, विदेशीले गर्ने हेपाहा व्यवहारप्रति पनि उनको उत्तिकै असन्तोष छ । नेपालीहरूले कुनै समस्या वा संकट झेल्नुपर्दा विदेशीहरू चोचोमोचो मिलाउन अग्रसर हुन्छन् । सहयोगका लागि आश्वासन पनि दिन्छन् । तर, उनीहरूको सहयोग कस्तो हुन्छ त ? ज्ञवालीका मुक्तकका यिनै हरफहरूले प्रस्ट पार्छ–
‘घर जलाइदिन्छन् र खरानीको व्यापार दिन्छन्
भोका पेटलाई कोसेली गोली र हतियार दिन्छन्
सहयोग यस्तो छ कि हजुर हाम्रा हितैषीहरूको
खुट्टा काटेर लैजान्छन् र वैशाखी उपहार दिन्छन् ।’
मुक्तककार ज्ञवालीले आफ्नो सिर्जनालाई पाँच खण्डमा बाँडेका छन् । पहिलोमा आमा–बा, दोस्रोमा देश र माटो, तेस्रोमा विम्ब–प्रतिविम्ब, चौथोमा मनको आवाज र पाँचौंमा घाम–छाया रहेका छन् । यसरी पाँचौं खण्डमा विभक्त उनका हरेकजसो मुक्तकहरूले जीवन भोगाइका पत्रपत्रलाई उप्काउने काम गरेका छन् । अभिभावकप्रति श्रद्धाभाव, देशको बिग्रँदो अवस्थाप्रति चिन्ता, माटोप्रति अपार स्नेह, विदेशीहरूको गिद्धेदृष्टि, प्रियजनहरूको सम्झना, माया–प्रेमका उद्गारजस्ता अनेक आयाममा उनका मुक्तक फैलिएका छन् ।
कृति ः रुझेर अग्निवर्षामा
विधा ः मुक्तक संग्रह
मुक्तककार ः रुद्र ज्ञवाली
पृष्ठ ः १०८
मूल्य ः रु. १७५।–